काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको नेपालको दोस्रो क्रमको लकडाउनले झन्डै तीन महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। अझै कति समयसम्म यो स्थिति लम्बिने हो ठेगान छैन। विज्ञहरुका अनुसार यसको तेस्रो लहर पनि आउने बताउँछन् ।
अभूतपूर्व यो सङ्कटले अर्थतन्त्रमा अहिले नै गम्भीर असर पारिसकेको छ। यो स्थिति जति लम्बिन्छ, त्यति नै असर घातक बन्दै जानेछन्। अहिले पनि देश लकडाउनको स्थितिमै रहेको छ , पुर्ण रुपमा कुनै क्षेत्र पनि खुलेको छैन् ।
पछिल्लो केही समय अगाडिदेखिको लकडाउनले व्यापारी, निजी व्यवसायी, बैदेशिक रोजगारीमा जाने ब्यक्ति र आम जनता धेरै मर्कामा परेका छन् । अधिकाश मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । त्यसका पनि झन पर्यटन क्षेत्र त ध्वस्तै भएको छ । जनताले अझै कसरी कुन तवरले आफ्नो व्यवसाय र जिविकोपार्जन गर्ने कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा करिब १० लाख भन्दा बढी निर्भर छन जसको हालत नाजुक छ। सरकारले भने यस क्षेत्रलाई खासै कुनै सहयोय पुर्याउन सकेको छैन् । झन बैंकहरु र घरबेटीको अर्कों चरम यातना।
लकडाउनमा बैकको लगातार फोन
लकडाउनबाट भर्खरै बाहिर निस्कन थालेका व्यापारी, निजी व्यवसायी तथा सामान्य रोजगारी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका आम जनतालाई बैकबाट लगातार फोन आउन थालेको छ । एक व्यापारीले बताएअनुसार लगातार बैकबाट फोन गरेर किस्ता कहिले तिर्नु हुन्छ भन्ने गरेको बताए । उहाँ भन्नुहुन्छ - अहिले कुनै व्यापार नै छैन , कसरी तिर्ने बैकको किस्ता ,न सरकारले केही छुट सम्बन्धी कुरा उठाएको छ ,मेरो अब भाग्ने र मर्ने भन्दा केही उपाय छैन । उनले अहिले सरकारले गरेको लकडाउनमा ब्यापार खोल्न नदिई घरमै बन्द गरी राखेकोले ऋणको सावा ब्याज तिर्न नसकने बताए । बरु अहिले तत्कालको समस्या टार्न नयाँ ऋण बनाएर दिनुस र पहिलेकोलाई पनि पछि तिर्छु भन्दा नि बैंकले चरम यातना दिने गरेको उनको गुनासो छ ।
यो त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो , लकडाउनको मारमा देखा नपरेका यस्ता कयौँ व्यवसायीहरु रहेका छन् । जसको कारण सरकारले बैकहरु सम्बन्धी राम्रो निति नल्याउदा आम जनता मारमा परेका छन् । कत्ती त डिप्रेसनको सिकार भएका छन् भने कत्तीको त उठिबॉस नै भइसकेको छ ।
सरकारले लकडाउन गर्ने ,बैकहरुले एक पैसा पनि नछाडने
सरकारले कोरोना भाइरस दर दोब्बर रुपले बढेको भन्दै लगातार केही विकल्प नसोची लकडाउनको समय थपिरहेको छ । तर , लकडाउन मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रणको उपाय होइन । त्यसो त यहाँ रोगको भन्दा नि भोकको चिन्ता छ ।
यही अवस्थामा नेपालका सबै बैकहरुले जनताको भावनालाई नबुझी लगातार किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । जनताको लागी एक पैसा पनि राहत स्वरुप छुट छैन । किन सबै बैकहरुले ब्यापारीलाई जुका सरी चुसिरहेका छन ? यो समयमा साथ दिनुपर्ने बैकहरुको कर्तव्य होइन र ? जसको कारण अहिले कोरोनाको कुनै प्रभाह नै नगरी जनता विभिन्नि ठाँउमा बैकहरुको विरुदमा आन्दोलन र नारा जुलुसमा उत्रिन थालेका छन् । केही समय अगाडि मात्र नेपाली काँग्रेस पर्साले कर मिनाहको माग गर्दै वीरगञ्जमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौको विभिन्न ठाउँमा पनि विरोधहरु भइरहेका छन् ।
के भन्छन त नयाँ गभर्नर
अहिले लकडाउन सामान्य खुलेसँगै बैकहरुले जनतालाई किस्ता लगायतका विभिन्न विषयमा यातना दिइराखेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको धारणा राख्नुभएको छ ।
भर्चुअल माध्यमद्वारा भएको एक वैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थान तर्फ उन्मुख हुँदै थियो । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चिता तर्फ धकेलिएको छ ।” तथापि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो , अहिले हामी सबैको ध्यान कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई भोलि फेरि चलायमान गराउन प्रयास गर्ने तर्फ केन्द्रित छ।
लकडाउनको महामारीले उद्योगधन्दादेखि लिएर आम जनताको दैनिक जीवनमा एकदमै नराम्रो असर परेको बेला बैंक भने खाली नाफा कसरी धेरै कमाउ भन्ने तर्फ मात्र उन्मुख भएका छन् । व्यापारी मरोस् या बाँचोस् कुनै मतलब नै छैन् , खाली नाफा र बोनसको पछि लागेका छन् ।
अन्नत हामी पनि यही भन्न चाहन्छौ, ब्यापारी बाँचे पो बैंक पनि टिक्ने हो। यी दुवै क्षेत्र मिलेर जान सक्नु पर्छ, यातना दिने होईन। सरकारको यो बिषयमा चाँडै ध्यान जावस् । सबै बैंकको सञ्चालक समिति र सी.ई.ओ. लाई बोलाएर जनतालाई दुःख नदिन कड़ा निर्देशन दिन पर्ने देखिएको छ ।